Usayizi osayizi ogcwele kanye ne-box ntwasahlobo | Rayson
Ubulukhuni obulinganiselayo ezinhlangothini eziphindwe kabili ephaketheni intwasahlobo umatilasi + ngokulinganisela izinhlanzi ezinhlangothini eziphindwe kabili ezinhlangothini eziphaketheni intwasahlobo umatilasi, https: //www.raysenglobal.com.cn
Ukuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle okukhiqiza, kanye nensizakalo ephelele, iRayson ihola embonini manje futhi isakaza iRayson yethu emhlabeni wonke. Ngokubambisana nemikhiqizo yethu, izinsizakalo zethu nazo zinikezwa njengezinga eliphakeme kakhulu. Usayizi osayizi ogcwele kanye nebhokisi le-entwasahlobo iRaysonON Rayson baneqembu labasebenza ngezinsizakalo abanesibopho sokuphendula imibuzo ephakanyiswe amakhasimende nge-Intanethi noma ngocingo, ukulandelela isimo seLogistics, kanye nokusiza amakhasimende ukuxazulula noma iyiphi inkinga. Ukuthi ungathanda ukuthola imininingwane eminingi kulokho, kungani futhi senza kanjani, zama umkhiqizo wethu omusha - umatilasi ogcwele kanye nentwasahlobo yebhokisi, noma ungathanda ukuzwa kusuka kuwe.Wenza lo mkhiqizo ukhululekile futhi uphephile. Ngeke kubangele ukukhishwa kwendwangu noma ukuholela ekuvuvukeni kwesikhumba.